बराहतालका बाढीपीडितहरुलाई राहत वितरण ( फोटो फिचर सहित ) - Bulbule Khabar
बराहतालका बाढीपीडितहरुलाई राहत वितरण ( फोटो फिचर सहित )
चैत २२, सुर्खेत । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका- २ मा बसेका बाढीपीडितहरुलाई राहत वितरण गरिएको छ ।
कोरोना संक्रमण लाई रोक्न भन्दै सरकारले लकडाउन घोषणा गरे संगै बाढीपीडितहरुलाई दैनिक छाक टार्न सहज होस भनेर विभिन्न व्यक्तिहरुको सहयोगमा वराहताल गाउँपालिकाको समन्वयमा राहत वितरण गरिएको हो ।
९० घरधुरी रहेको बाढीपीडित बस्तिमा चामल, पिठो, नुन, साबुन लगाएतका खाध्य सामाग्री वितरण गरिएको हो ।
राहत बितरण गर्दै वराहताल गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले गाउँ कार्यपालिकाको आकस्मीक बैठकले अतिविपन्न नागरिकलाई राहत दिने निर्णय भएअनुसार पहिलो राहत वडा नं. २ मा रहेका २०७१ सालका बाढीपीडितहरुको वस्तीमाबाट सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाको बैठकले प्रत्यक वडामा ३ लाख बराबरको राहत दिने निर्णय गरेको भन्दै वडा नं. २ का अध्यक्ष योवराज कार्कीले एकद्धार प्रणालीमा राहत वितरण गरिने बताए ।
देश तथा विदेशमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरु संग समन्वय गरि राहत संकलन गर्नु हुने अभियान्ता एवं पत्रकार नगेन्द्र उपाध्यायले वस्तीमा खाध्यान्नको अभाव स्थिति देखेपछि राहत संकलनको अभियान सुरु गरेको जानकारी दिए ।
‘आजसम्म हामीले यो अभियानमार्फत ११३ परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेका छौं ‘, उनले भने । ‘सुर्खेतमा १०४५ बाढीपीडित परिवार छन् । अझै तपाईहरुको सहयोगको खाँचो छ ।’
दाउरा बेचेर, गिट्टि बेचेर गुजारा गर्नेहरु लकडाउनको कारण व्यापार रोखिएपछि समस्या परेको बताउने स्थानीयहरु राहत पाएपछि भने खुशि देेेेेखिन्थे ।
राहत पाएसंगै दंग भएका स्थानीयले पिउने पानीको चरम अभाव भएको भन्दै त्यसको पुर्ति गरिदिन गाउँपालिका संग आग्रह गरेका छन ।
राहत संकलन गर्नका लागि सुर्खेत समाज दक्षिण कोरीयाले ५० हजार, नेबि संघका पुर्व केन्द्रीय सदस्य विवेक आचार्यले २० हजार, मिड वेष्टन फिटनेस सेन्टरका प्रमोद हमालले २० हजार, न्यू हिमाल ट्रेडर्सका सञ्चालक हिमाल जैसीले २० हजार, युवा व्यवसायी एबम समाजसेवी बखतबहादुर शाहीले २० बोरा चामल, समाजसेवी एबम कर्मचारी लवराज सुवेदीले १० हजार र आधिकारीक ट्रेड यूनियनका केन्द्रीय सदस्य शुसिल केसीले ५ हजार सहयोग गरेका थिए ।
यस्तै सुर्खेत होराईजन एकेडेमिका प्रिन्सीपल धनश्याम खड्का र मध्यपश्चिम बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल मिनबहादुर खड्का मार्फत ९० घरधुरी लाई पुग्ने गरि नुन, सावन र पिठो बितरण गरिएको छ । यातायात उपलब्ध गराउने मिनराज थापा रहनुभएको छ ।
प्रकाशित मितिः शनिबार, चैत्र २२, २०७६ 8:59:44 PM
Prevमाक्स र साबुन वितरण
Nextकामना सेवा विकास बैंकले गर्‍यो सुर्खेतमा खाद्यान्न सामाग्री वितरण